Ogaden News Agency (ONA) – TV ga CNN oo Dacwad Ka Dhan Ah Trump Kusoo Oogay.
TV ga CNN oo Dacwad Ka Dhan Ah Trump Kusoo Oogay.
Posted by ONA Admin	/ November 14, 2018
TV ga caalamiga ah ee CNN ayaa dacwad ku oogay maamulka Trump ka dib markii Aqalka Cad ruqsaddii kala noqday mid ka mid ah wariyeyaashiisa sarsare.
Madaxii weriyeyaasha uga soo warama Aqalka Cad, Jim Acosta, ayaa laga qaaday kaarkii weriyenimada ee uu ku galayey todobaadkii hore saacado uun markii ay hadal taag taagan is weydaarsadeen Trump. Shabakaddu waxay ku doodaysaa in dhacdadaasi xad gudub ku ahayd xuquuqda dastuuriga ah ee Acosta.
Dacwaddan oo laga furay maxkamadda Washington DC Talaadadii, ayaa Madaxweynaha iyo laba ka mid ah kaaliyeyaashiisa ku sheegtay dadka laga eed sheeganayo. Waxaana ka mid ah madaxa shaqaalaha John Kelly iyo af-hayeenka Aqalka Cad Sarah Sanders oo sheegtay in sababta ruqsadda Acosta loola noqday ahayd habdhaqan aan la aqbali karin dartii.
Intii ay socdeen su`aalaha weriyeyaasha, ayuu Acosta kula loollamay adeegsiga Trump ee erayga “qabsasho” isagoo kala jeeda qulqulka muhaajiriinta ka imaanaya Ameerikada Dhexe ee galaya Mareykanka. Wuxuu sidoo kale kula loollamay xayeysiinta ka hortagga muhaajiriinta oo loo arkay inay tahay mid takoor ku saleysan.
Markii uu Acosta isku dayay inuu su`aal ka weydiiyo baadhitaanka Ruushka ee faragelintii la sheegay inuu ku lahaa ololihii madaxtinnimada sanadkii 2016, ayuu Trump ku celceliyay “intaas ku jooji” isla markaana “makarafoonka dhig”. Gabar ka tirsan shaqaalaha Aqalka Cad ayaa isku dayday inay makarafoonka ak qaaddo weriyaha, kaddibna Acosta ayaa diiday inuu u dhiibo isagoo ku yiri “iga raalli noqo marwo”.
Trump ayaa kaddib ka tegay masraxa, kaddib wuu soo laabtay isagoo yiri: “CNN waa inay ceebsataa inaad adiga oo kale uu u shaqeyso. Waxaad tahay qof xun oo xaasid ah.” Wuxuu intaas ku daray: “Sida aad ula dhaqantay Sarah Huckerbee [xoghayihiisa warbaahinta] waa si qaab daran,” isagoo aan sababta sharrixin.
Weriye kale ayaa difaacay Acosta, isagoo ku sheegay inuu yahay “weriye fiican”. Trump ayaa u jawaabay, “hagaag taageere kuuma ihi adiga xitaa,” kaddibna waxaa is qabsaday qosolka dadkii goobta joogay.
Acosta ayaa CNN u sheegay inuu weydiinayay su`aal uusan Trump jecleysan taas oo sababtay inay hadallo is dhaaf dhaafsadaan. Wuxuu beeniyay inuu u gacan qaaday gabadha, isagoo yiri: “Waxaan isku dayay inaan makarafoonka haysto si aan su`aalo u weydiiyo madaxweynaha.”
Wuxuu sheegay inuusan wax khalad ah sameynin, balse uu u maleynayo mid uu Aqalka Cad uga dan leeyahay inuu cadaadis ku saaro weriyeyaasha. CNN ayaa qoraal ay Twitter-ka soo dhigtay ku sheegtay in kaarka weriyaha lagala laabtay ay aargoosi u tahay su`aalihii kululaa ee Jim Acosta.
Ururka Weriyeyaasha ka soo warrama Aqalka Cad ayaa tallabadaasi ku tilmaamay mid aan sal lahayn, waxayna ugu baaqeen Aqalka Cad inuu deg deg uga laabto amarkaas.